Dhacdo la yaab leh oo ka qabsatey laba Imaam oo Muslimiin ah Airport ku….(Sawiro) – SBC
Dhacdo la yaab leh oo ka qabsatey laba Imaam oo Muslimiin ah Airport ku….(Sawiro)
Dhacdo yaab leh oo si weyn saxaafada aduunku u hadal hayso ayaa ka qabsatey mid ka mid ah garoomada diyaaradaha dalka Mareykanka laba wadaad oo Muslimiin ah oo ah Imaamyo Masaajid.
Labada wadaad oo lagu kalamagacaabo Masudur Rahman & Mohamed Zaghloul ayaa laga soo dajiyey diyaarad ay saarnaayeen oo ku socotey mid ka mid ah gobolada wadanka Mareykanka oo ay uga qayb galayeen shirka Imaamyada Masaajidyada ee Waqooyiga Ameerika.
Telefishinka WCNC ee laga daawado magaalada Charlotte ee ugu weyn gobolka North Caroline ee wadanka Mareykanka ayaa tabiyey in labadan wadaad ee Muslimiinta ah markii ay ka gudbeen qaybta amaanka & hubinta ducomintiyada ayna fuuleen diyaaradii oo ka duuli rabtey garoonka diyaaradaha magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ee Koonfurta Bari ee dalka Mareykanka iyagoo u socdey magaalada Charlotte ayaa duuliyihii diyaarada diidey in uu diyaarada duuliyo ilaa ay ka degaan labada wadaad isagoo sheegay in “Rakaabka diyaarada aanay dareemeyn raaxo ama amaan” inta ay diyaarada saaran yihiin wadaad.
Kulanka wadaado u socdeen ee ay ka qayb galayaan Imaamyada waqooyiga Ameerika ayaa looga hadlayey Cabsida Islaamka & faquuqa ka dhanka ah Muslimiinta Mareykanka.
Diyaarada ay raaci rabeen wadaadan oo aheyd Delta Airlines (Atlantic Southeast Airlines) ayaa duuliyihii markii diyaarada uu keenay halka ay duusho ee run way-ga wuxuu daqiiqado ka dib uu dib ugu soo celiyey garoonka gaar ahaan jaranjaarada laga dago lagana fuulo diyaarada isagoo dalbadey in laga dajiyo labada wadaad oo dhulka ay tagaan. Ciidamada amaanka & shaqaalaha diyaarada ayaa labadii wadaad dhulka keenay waxaana lagu sameeyey baaritaan labaad oo dheeraad ah, waxaana laamaha amaanku ay sheegeen in labada nin aanay wax qatar ah wadan ayna diyaarada raaci karaan, balse duuliyaha ayaa sheegay in diyaarada aanay raaci karin nimankan, isagoo ku andacooday inaanay ku niyadsameyn rakaabka kale ee diyaarada saaran, wuxuuna si deg deg uga kacay garoonka isagoo diyaaradii duuliyey.
“Tani waa talaabo cunsirinimo ama faquuq ah waana sabab diinteena & muuqaalkeena, iyo faham la’aanta diinteena, hadii ay ogaal lahaayeen diinteena sidaasi ma aysan sameeyeen” sidaasi waxaa yiri Mr Rahman oo saxaafada la hadley ka dib dhacdadaasi.
Mr Rahman wuxuu sheegay in isaga iyo Mohamed Zaghloul oo xubin ka ah ururka Islaamka ee magaalada Memphis,ciidamada amaanka ay baaritaankii ku sameeyeen ay u fasaxeen in ay diyaarada raaci karaan, laakiin duuliyihii uu diiday diyaarada inay raacaan labada wadaad. Mr Rahman wuxuu sheegay saraakiisha Delta in ay mudo nus saac ah la hadlayey duuliyadhaa balse uu diidey in diyaarada ay raacaan, waxaana labada nin la geeyey qolalka nasiinada ee garoonka iyagoo isla maalintii loo diyaariyey inay raacaan duulimaadkii xigey.
Mr Rahman oo macalin luuqada Carabiga ka ah Jaamacada Memphis wuuxu sheegay in dhacdadaasi uu ka raali galiyey maareeye ka tirsan shirkada diyaaradaha Delta.
Mr Rahman wuxuu sheegay inuu labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Hindiya , Mr Zaghloul uu ku labisnaa khamiis isla markaana uu garkiisu uu u jarnaa habka Muslimiinta.
Afhayeenka maamulka amaanka duulimaadka Jon Allen oo la hadley telefishinka CNN wuxuu xaqiijiyey dhacdada isagoo ka raali galiyey labada wadaad falkaasi.
Sidoo kale Jarek Beem oo ah afhayeenka shirkada diyaaradaha ee Atlantic Southeast Airlines, wuxuu sheegay in dhacdadaasi baaritaan lagu hayo.
Ibrahim Hooper oo ah afhayeenka urur u dooda xuquuqda aadamaha oo lagu magacaabo , Golaha xiriirka Islaamka Ameerika (Council on American-Islamic Relations) ayaa isaguna geestiisa u sheegay Telefishinka CNN in ay labadan nin ay la soo xiriireen xafiiskooda, isagoo sheegay in dhacdadan ay kala hadlayaan dhinacyada ay quseyso isla markaana aanay dib dambe u dhicin fal caynkan oo kale ah.